प्रशन्‍नाले उचालिन इन्डस्ट्रियल पिस नेपाल म्युजिक अवार्ड | Suvadin !
प्रशन्‍नाले उचालिन इन्डस्ट्रियल पिस नेपाल म्युजिक अवार्ड
इन्डस्ट्रियल पिस नेपाल म्युजिक अवार्ड
सानैदेखि प्रतिभावन व्यक्तिको नाम हो प्रशन्ना पाण्डे । जो सानैदेखि मिठो गीत गाउँथिन् । यतिवेला उनै गायिका पाण्डेले ‘इन्डस्ट्रियल पिस नेपाल म्युजिक अवार्ड’ उचालेकी छन् ।
Sep 12, 2019 15:36
काठमाडौं । सानैदेखि प्रतिभावन व्यक्तिको नाम हो प्रशन्ना पाण्डे । जो सानैदेखि मिठो गीत गाउँथिन् । यतिवेला उनै गायिका पाण्डेले ‘इन्डस्ट्रियल पिस नेपाल म्युजिक अवार्ड’ उचालेकी छन् ।
औद्योगिक शान्ति नेपाल संस्थाको आयोजनामा सम्पन्न ‘इन्डस्ट्रियल पिस नेपाल म्युजिक अवार्ड २०७६’ मा गायिका पाण्डेलाई ‘म्यानेजमेन्ट च्वाइस अवार्ड’ प्रदान गरिएको हो । गायिका पाण्डेको ‘मरिहत्ते’ बोलको लोकपप गीतका लागि उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको हो ।
हालसम्म दुई दर्जनभन्दा बढी गीतमा आवाज दिइसकेकी गायिका पाण्डेले लोकपप, आधुनिक, पप, तीज गीत, दसैं गीतलगायतमा स्वर दिइसकेकी छिन् ।
मरिहत्ते गीतका शब्द भुपेन्द्र खड्का हुन भने गीतमा संगीत हरि लम्सालले भरेका हुन्। उक्त गीतको म्युजिक भिडियोमा प्रियंका कार्की र विल्सनविक्रम राईले अभिनय गरेका छन्। गायिका पाण्डे आफैले पनि केही गीतहरूमा मोडलिङ गरेकी छिन् ।
कार्यक्रममा सर्वोत्कृष्ट गायक कुलेन्द्र वि.क. र सर्वोत्कृष्ट गायिका राधिका हमाल घोषित भए। विकले सालको पात गीतबाट सर्वोत्कृष्ट गायकको अवार्ड हात पारे भने गायिका हमालले लाहुरे गीतबाट सर्वोत्कृष्ट गायिकाको अवार्ड हात पारेकी हुन् । कार्यक्रममा पत्रकार, समाजसेवी, व्यवसायी, खेलाडीलगायत २६ जना व्यक्तिलाई सम्मान गरिएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रम दिनेश डिसीले सञ्‍चालन गरेका थिए। अवार्ड समारोहमा औद्योगिक शान्ति नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सन्दिप महतले स्वागत गरेका थिए । कलाकारलाई सम्मानको वातावरण बनाउन अवार्ड आयोजना गरिएको उनले बताए। कार्यक्रमको निर्देशक संचारकर्मी सूर्य चन्द हुन् ।